Ny fomba fitomboan'i John Whitmore, mety ho an'ny mpandraharaha | Famoronana an-tserasera
Mieritreritra ny hanao tetikasa vaovao ve ianao ary hanomboka lalana mankany amin'ny tanjona vaovao? Raha izany dia afaka manampy anao ity lahatsoratra ity. Manaraka, ny mpiara-miasa amintsika Sandra burgos de 30K Coaching, dia hanolotra ny fomba Grow, paikady mahaliana indrindra hifantohana sy hiatrehana karazana fanamby. Havelako an-tsoratra aminao ny vaovao ary avy eo ny kinova video. Efa fantatrao ve ny teknika Grow?
Ny anaran'ny fomba, Grow, izay amin'ny teny anglisy dia midika hoe "mivoatra", dia noho ny fiandohan'ireo teny anglisy amin'ny dingana 4 mandrafitra an'io dingana io. Manoro hevitra anao aho mba hanana taratasy sy penina mora ampiasaina ianao mba hahafahanao mampihatra ny fomba rehefa manazava azy aminao aho . Aza misalasala miato kely araka izay ilainao ny horonan-tsary. Andao handeha amin'ny fomba!
Ny dingana voalohany dia ny mamaritra ny tanjonao, dia ny mamaritra izay tianao haleha. Ity dingana ity dia manan-danja amin'ny fananana ny fiainana tadiavinao, satria ny fomba tokana hanatanterahana azy dia ny mazava tsara momba izany fiainana izany. Manontania tena. ireto fanontaniana manaraka ireto ary eritrereto tsara ny valinteninao: Inona marina ny fiainana tadiavinao? Inona no tianao ho tratrarina amin'ny faran'ity taona ity? Inona no tena tadiavinao? Mba hahatratrarana izany tanjona izany, inona no ilainao Mba hahatratrarana Voalohany? Inona avy ireo zavatra tsy ampy azonao anio hanombohana ny tanjonao? Ny valinteninao amin'ireo fanontaniana rehetra ireo dia mamolavola izay rehetra misy ny tanjon'ny fiainanao ankehitriny. !! Arahabaina !! Efa nofaritanao ny tanjona.
Ny dingana faharoa amin'ny fizotrany dia ny famakafakana hoe manao ahoana ny toe-javatra misy anao amin'izao fotoana izao, dia ny mamaritra hoe avy aiza ianao. Diniho am-pahatoniana ireto fanontaniana manaraka ireto hijerena ny tena zava-misy. mifandray amin'ny tanjonao? Inona ny sakana misakana anao tsy hahatratra ny tanjonao? Raha manandrana manatratra ny tanjonao ianao, inona no mitranga? Ahoana no hiatrehanao ny vato misakana? Inona avy ireo fanohanana anananao manodidina anao izay hanampy anao hahatratra ny tanjonao? Hamarino tsara fa voamarikao izay rehetra mitranga amin'ny fiainanao ankehitriny mifandraika amin'ny tanjonao, satria ny toe-javatra misy anao izao dia ho lohataona amin'ny fiainana tadiavinao.
Na: Safidy (Famaritana safidy na safidy)
Ny dingana fahatelo amin'ny fomba GROW dia misy ny famaritana ireo safidinao hahatratrarana ny tanjonao, izany hoe amin'ny famaritana ireo lalana samihafa mety hitarika anao mankany aminy. Tsy mbola fotoana tokony hisafidianana, ka mamoaka hevitra nefa tsy tsaraina. Arakaraka ny isan'ny safidy anananao no tsara kokoa. Ireto misy fanontaniana vitsivitsy izay hanampy anao amin'ity dingana ity: Inona avy ireo làlana mety hitarika anao amin'ny tanjonao? Azo antoka fa misy bebe kokoa ... inona ireo safidy hafa hitanao? Raha izaho no teo amin'ny toe-javatra misy anao dia inona no torohevitra omenao ahy hahatratrarako ny tanjoko? Raha tsy fetra ny vola dia inona no hataonao? Ezaka farany iray ... azonao atao ve ny mieritreritra safidy hafa? Nahita zavatra maro azo atao ve ianao handehanana mankany amin'ny fiainana tadiavinao? Izao dia izao no fotoana ilanao azy ireo.
W: Famonosana (Drafitra hetsika)
Ary ny dingana fahefatra sy farany an'ny fomba GROW dia ny fametrahana ny drafitra hetsika, izany hoe ny famolavolana ny lalanao. Valio amin'ny fanoloran-tena marina ireto fanontaniana manaraka ireto. Amin'ireo safidy rehetra, iza amin'ireo no fidinao? Dingana mivaingana inona avy no mamorona an'io lalana io? Rahoviana ianao no hanao ny asa tsirairay ao amin'ny drafitra? (Farito ny daty marina) Ahoana no ahazoanao antoka fa manatanteraka ny drafitrao ianao? Inona no hataonao anio hanombohana handeha? Ary eo no mifarana ny fomba GROW.
Manomboka amin'ity fotoana ity, ny sisa ataonao dia ny manaraka ny drafitra. Tazomy hatrany ny masonao raha mivoatra ny toe-javatra misy anao sao diso fotoana iray ianao… satria raha vao manomboka miasa amin'ny drafitrao ianao dia miseho ny fotoana mety. Inona no hevitrao momba ny fomba? Azonao ampiharina amin'ny fanarenana ny fiainanao izany, fa amin'ny fanatratrarana tanjona kendrena kokoa. Raha ny tena izy, raha toa ka malalaka be ny tanjonao fanombohana dia tsara kokoa ny mampiasa an'io fomba io amin'ny dingana tsirairay anaovanao izany tanjona lehibe izany. Amin'ity fomba ity dia tsy dia hahagaga loatra ary ho azonao antoka ny fahatongavanao amin'ny tsipika fahatongavana. Mankanesa any amin'ny fizarana fanehoan-kevitra ary lazao aminay: Inona no antony anaovanao ny drafitra?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny fomba fiasa John Whitmore's Grow, mety ho an'ny mpandraharaha
Juan Muñoz Rodriguez dia hoy izy:
Tiako izany raha misoratra anarana amin'ny mailaka sy ny karazan-hafatra hafa ianao.
Valiny tamin'i Juan Muñoz Rodriguez
Xochilt dia hoy izy:
Tena zava-dehibe izany satria misy olona mifantoka amin'ny hevitra maro hafa tsy omena (mijanona), fomba tsara iray hampandehanana ny tanjontsika izany satria ianao mampihetsika ny eritreritrao, ny hetahetanao ary bebe kokoa, miteny aho amin'ny ahy, tsara.
Valiny tamin'i Xochilt